Looks Nepal वडा बासिकाे समस्या सम्बाेधन गर्न घर घर पुगेका छाैं – गंगा प्रसाद घिमिरे – Looks Nepal
काेराेना भाईरसका कारण देश लक डाउनमा छ । याे समयमा जनजिवन कष्टकर बन्दै गैरहेकाे छ । याे अवस्थामा गाउंका मानिस आफ्नाे भाेट हालेर चुनेका जनप्रतिनिधिबाट सेवाकाे आसमा रहेका छन् । यहि सेराेफेराेमा बनेपा नगरपालिका वडा नं २ टुकुचा नालाका वडा सदस्य गंगाप्रसाद घिमिरे संग गरिएकाे कुराकानिकाे सारंस प्रस्तुत गर्दछाै ।
लकडाउनको यो समय कसरी बिताइ रहनुभएको छ ?
यस बिचमा जनताको कामका अतिरिक्त घर खेतबारीको काम गर्ने , गाउँघरका नाली सोर्ने, झाडी पन्छाउने, बाटो सफा गर्ने , मन्दिरको सरसफाईमा ध्यान दिने आदी कार्यमा उपयोग गरिरहेछु ।
कोरोना बिरुद्ध वडा कार्यालय र नगरपालिकाले के अभियान सञ्चालन गरेको छ ?
हाम्रो वडामा ६ सय २० घर धुरी र करिब ३ हजार २ सय जनसंख्या रहेको छ । हामी प्रत्येक घरधुरीमा पुगेर वहाँहरुको समस्या र हाम्रो सहयोगका बारेमा घरदैलो गर्यौं ।प्रत्येक घर धुरीलाई साबुन, मास्क ,डिटोल, सिटामोल र स्यानिटाइजर बितरण गर्याै । यसका साथै तरकारी र दुग्धजन्य उत्पादनको बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउने काम गरयौं । वडामा बिभिन्न रोगका कारण बिरामी भएकाहरुलाई अस्पताल पुर्याउने काममा सहयोग गरेका छौं । प्रमुख सडकहरुमा औषधी छर्कने काम नगरपालिकाको सहयोगमा गर्यौं ।
कोरोना बिरुद्धको अभियानमा जनप्रतिनीधिको भुमिका कमजोर भयो भन्ने आएको छ ? खासमा के हो ?
हामीले पनि जनताले चाहेजस्तो अभियान त सञ्चालन गर्न सकेनौंहोला तर हामीसँग भएको साधन, स्रोत र सहयोगी हातहरुको सहयोगबाट सकेसम्म सहयोग गर्यौं । यो अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी , समाजसेबी, शिक्षासेवी र यूवाहरुको साथ र सहयोगले आजसम्म वडालाई सुरक्षित राख्न सफल भएका छौं ।
तपाईहरुले राहत बितरण गर्दा आफना मतदातामात्र हेर्नुभयो रे ? सबै जनतालाई यो दुःखको घडीमा सहयोग गर्नुपर्दैन ? किन बिभेद ?
अन्य गाउँपालिका , नगरपालिका वा वडाहरुमा के भयो ? थाहा भएन । तर हामीले डेरा गरी बस्ने ३७ परिवारलाई राहत बितरण गरेका छौं । जस – जसलाई समस्या छ उनीहरुको घरमै पुगेर वहाँहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने गरेका छौं ।हामी यस वडाका सबै जनताको सेवा गर्छु भनेर निर्वाचनमा आएका हौं । हामीलाई बिश्वास गरेर मतदान पनि गर्नुभयो । हामी निर्वाचित पनि भयौं । त्यसैले सम्पूर्णलाई सहयोग गर्नु र साथ दिनु हाम्रो कर्तब्य हो ।
तपाईको वडा तरकारी र दुग्ध उत्पादनको केन्द्र नै मानिन्छ ? उत्पादनहरुको बिक्रि बितरणका लागी वडाले के गरीरहेको छ ?
तरकारी र दुधको केन्द्र मात्र नभएर हाम्रा अधिकांश दाजुभाइ दिदीबहीनीको आम्दानीको स्रोत नै तरकारी र दुध नै हो । लकडाउनले किसानहरुलाई सबैभन्दा मार परेको छ । म माग गर्न चाहन्छु संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छिटटै किसानका लागी राहतको प्याकेज ल्याओस् । अन्यथा किसानहरुलाई हातमुख जोर्न समेत मुस्किल पर्ने अबस्था छ । तरकारीमा असिनाले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । यसप्रति संबन्धित क्षेत्रको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।
तपाई आफैं नगरको सांसद हुनुहुन्छ , किसानलाई नगरको राहत प्याकेज कहिले आउँछ त ?
हामी नगरपालिकालाई अनुरोध गरिरहेका छौं । तपाईहरुलाई थाहा नै छ , नगरपालिका दलगत स्वार्थमा रुमल्लिएकाले चाहे जस्तो काम गर्न सकेको छैन । हाम्रो प्रस्ताब छ हामी दलभन्दा माथि उठ्यौं । बिकास र जनताको पिरमर्कालाई प्राथमिकतालाई ध्यान दिऊ । तपाईहरुको साथ र सहयोग भयो भने अबश्य नगरले किसानको समस्या सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ ।
केन्द्रदेखि गाउँ नगरसम्म सत्ता र शक्तिको होडबाजी चलेको बेला जनताको कुरा कस्ले सुन्ला र ? त्यसमा पनि सांसदहरुलाई त रबरछाप भन्छन् ?
तपाईको कुरा आंशिक सत्य नै होला , तर हामी सेबक होइन शासक हो भन्ने ठानेको दिनदेखि हाम्रो अबसान शुरु हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । साथीहरुले पनि बुझनु जरुरी पर्छ ।बुझनु पनि भएको होला ? जबसम्म सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ तब शासकहरु टिक्दैनन् । त्यसैले हाम्रो नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनीधि जनताप्रति बफादार छन् । जनताको कुरा अबस्य सुन्नेछन् ।
तपाईहरुको कामको स्पीरिटको खास श्रेय कस्लाई दिनुहुन्छ ?
यी सबै सोच र कामहरु गर्न हाम्रो टिम छ । जसको नेतृत्व श्रद्धेय वडाध्यक्ष हरिशरण घिमिरेले गर्नुभएको छ । वहाँजस्तो भद्र, शालिन र ब्यबहारिक ब्यक्तिको नेतृत्वमा नवराज घिमिरे, कमला र रुपा सहितको हाम्रो सामूहिक नेतृत्वले नै काम गर्ने उर्जा प्राप्त भएको छ । वडा सचिव रामनाथ कायस्थ र सहायक सचिव नन्द प्रसाद घिमिरेेकाेे पुर्ण सहयाेेग छ ।
बिडम्बना सिमित साधन श्रोतका कारण धेरै गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकिरहेका छैनौ । आगामी दिनमा पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं । सरकारले गरेको लकडाउनको पुर्ण रुपमा पालना गरि आफु नि बांचु अरु लाई नि बचाउं । कुनै पनि समस्या परेमा वा परेको देखेमा वडा मा सिधा सम्पर्क गर्नु होला । हामी सेवाका लागि हरदम तयार छाैं ।